I-20 000 yeetoni zeMveliso yoManyolo yeMveliso ye-Organic - YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd.
Isichumiso sendalo sisichumiso esenziwe kwimfuyo kunye nenkuku yesilwanyana kunye nenkunkuma yezityalo ngobushushu obuphezulu, obusebenza kakhulu ekuphuculeni umhlaba nasekufunxweni kwesichumiso. Izichumisi zendalo zingenziwa ngentsalela yemethane, inkunkuma yezolimo, imfuyo kunye nomgquba weenkukhu kunye nenkunkuma kamasipala. Ezi nkunkuma zezinto eziphilayo zifuna ukwenziwa kwakhona ngaphambi kokuba ziguqulwe zibe zizichumiso zezinto eziphilayo ezithengiswayo.
Utyalo-mali ekuguquleni inkunkuma ibe bubutyebi kufanelekile.
Ifowuni: + 86-13901833873
Imigca yokuvelisa isichumiso sendalo ngokubanzi yahlulwe yangaphambi kokunyangwa kunye negranulation.
Ezona zixhobo ziphambili kwinqanaba lonyango lwangaphambili ngumatshini weflip. Okwangoku, zintathu izinto zokulahla inkunkuma: isiraphu esilahliweyo, idumper yokuhamba kunye nedumper hydraulic. Banempawu ezahlukeneyo kwaye banokhethwa ngokweemfuno zokwenyani.
Ngokobuchwephesha begranulation, sineentlobo ngeentlobo zegranulators, ezinje ngegranulators yegubu ejikelezayo, iigranulators ezikhethekileyo zezichumiso ezintsha zezinto eziphilayo, iidisk granulators, iihranulators ze-helix eziphindwe kabini, njlnjl. Banako ukuhlangabezana nemfuno yesichumiso sezinto eziphilayo esinexabiso eliphezulu kunye nokusingqongileyo. imveliso.
Sijonge ukubonelela abathengi ngomgca wemveliso ongcono ngakumbi nangokusingqongileyo, onokuthi uhlanganise imigca yemveliso yezichumiso eziphilayo kunye neetoni ezingama-20,000, iitoni ezingama-30,000, okanye iitoni ezingama-50,000 okanye amandla emveliso angaphezulu ngokwemfuno yokwenyani yemveliso.
5. Udaka: Udaka lwasedolophini, udaka lomlambo, udaka lokucoca ulwelo, njl.
Umgca wemveliso yemveliso yezichumiso Organic ikakhulu iqulathe dumper, isityumzi, Umxhubi, umatshini granulation, isomisi, umatshini okupholisa, umatshini ukuhlolwa, esongwayo, umatshini ukupakisha oluzenzekelayo kunye nezinye izixhobo.
►Ngokucacileyo izibonelelo zokusingqongileyo
Umgca wokuveliswa kwesichumiso se-organic kunye nesiphumo sonyaka seetoni ezingama-20 000, sithatha ilindle lemfuyo njengomzekelo, umthamo wonyango welindle lonyaka unokufikelela kuma-80,000 ee-cubic metres.
►Ukufunyanwa kwakhona kwezixhobo
Thatha umgquba wemfuyo kunye neenkukhu njengomzekelo, ilindle lonyaka lehagu elidityaniswe nezinye izinto ezingafunwayo zinokuvelisa iikhilogremu ezingama-2 000 ukuya kuma-2 500 zomgquba wezinto eziphilayo, oqulethe i-11% ukuya kwi-12% yezinto eziphilayo (i-0.45% ye-nitrogen, i-0.19% ye-phosphorus pentaoxide, i-0.6 % potassium chloride, njl.), enokwanelisa iihektare. Imfuno yesichumiso kwizixhobo zentsimi unyaka wonke.
Amasuntswana omgquba oveliswe kumgca wokuvelisa isichumiso sendalo atyebile kwi-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium kunye nezinye izakha-mzimba, ezinomxholo ongaphezulu kwe-6%. Umxholo wezinto eziphilayo ungaphezulu kwe-35%, ephezulu kunomgangatho wesizwe.
►Izibonelelo ezibonakalayo zoqoqosho
Imigca yemveliso yezichumiso zendalo isetyenziswa kakhulu kumhlaba wokulima, imithi yeziqhamo, ukutyala igadi, ingca ephezulu, ukuphuculwa komhlaba kunye namanye amasimi, anokuhlangabezana neemfuno zezichumiso eziphilayo kwiimarike zalapha nezingqongileyo, kwaye zivelise izibonelelo ezilungileyo zoqoqosho.
Ukuvundiswa kwezinto eziphilayo eziyimveliso ekrwada kudlala indima ebaluleke kakhulu kuyo yonke inkqubo yemveliso yezichumiso eziphilayo. Ukuvumba okupheleleyo sisiseko semveliso yesichumiso ekumgangatho ophezulu. Ezi ndawo zokulahla inkunkuma zinezibonelelo zazo. Zombini i-grooved kunye ne-groove hydraulic dumpers zinokufezekisa ukuvundiswa okupheleleyo komgquba, kwaye zinokufezekisa ingqokelela ephezulu kunye nokubila, ngomthamo omkhulu wemveliso. Ukuhamba kwedumper kunye nomatshini wokufaka i-hydraulic kufanelekile kuzo zonke iintlobo zezinto eziphilayo, ezinokusebenza ngokukhululekileyo ngaphakathi nangaphandle komzi-mveliso, ziphucula kakhulu isantya se-aerobic fermentation.
Isityumzi izinto ezimanzi-ezimanzi eziveliswa efektri yethu uhlobo olutsha-high isityumzi olunye-kakuhle, leyo bhetyebhetye kakhulu izinto eziphilayo nomxholo amanzi aphezulu. Isityumzi izinto semi-ukufuma isetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yezichumiso eziphilayo, nto leyo eye nefuthe lokutyunyuzwa elungileyo izinto emanzi ekrwada ezifana umgquba yenkuku kunye nodaka. I-grinder iyanciphisa kakhulu umjikelo wemveliso yezichumiso eziphilayo kwaye igcina iindleko zemveliso.
Emva kokuba impahla eluhlaza ityunyuziwe, ixutywe nezinye izinto ezincedisayo kwaye ivuseleleke ngokulinganayo ukwenza i-granulation. I-axis ethe tyaba yokuxuba isetyenziselwa ubukhulu becala i-hydration kunye nokudityaniswa kwezinto eziyimpuphu. I-blade yomoya inee-angles ezininzi. Nokuba yeyiphi na imilo, ubungakanani kunye nokuxinana kwentsimbi, izinto ezingavuthwanga zinokuxutywa ngokukhawuleza nangokulinganayo.
4. Ukunyusa ingqekembe
Inkqubo yegranulation yeyona nto iphambili kwimveliso yemveliso yezichumiso zomgquba. Isichumisi esitsha sesichumiso sezinto eziphilayo sifumana i-granulation efanayo ekumgangatho ophezulu ngokuqhubekeka okuqhubekayo, ukungqubana, i-mosaic, i-sphericalization, i-granulation kunye nenkqubo eshinyeneyo, kunye nokucoceka kwayo okungafunekiyo kunokuba phezulu njenge-100%.
5. Yomile kwaye ipholile
Isondo elipholileyo lipholisa amasuntswana kubushushu obuthile emva kokumisa. Ngelixa kuncitshiswa ubushushu bamasuntswana, umxholo wamasuntswana angancitshiswa kwakhona, kwaye malunga neepesenti ezintathu zamanzi angasuswa ngenkqubo yokupholisa.
Emva kokupholisa, kusekho izinto ezingumgubo kwiimveliso zamasuntswana ezigqityiweyo. Zonke iipowder kunye namasuntswana angafanelekanga anokuvavanywa ngesihlunu se-roller. Emva koko, ihanjiswa ukusuka kumjelo wokuhambisa ibhanti ukuya kwi-blender kwaye ivuselelwe ukwenza i-granulation. Amasuntswana amakhulu angafanelekanga kufuneka atyunyuzwe ngaphambi koxinano. Imveliso egqityiweyo ithunyelwa kumatshini wokutyabeka isichumiso somgquba.
Le yinkqubo yokugqibela yemveliso. Umatshini wokupakisha wobungakanani ozenzekelayo oveliswa yinkampani yethu ngumatshini wokupakisha ozenzekelayo owenzelwe ngokukodwa ukuveliswa kwamasuntswana eemilo ezahlukeneyo. Inkqubo yayo yolawulo enobunzima iyahlangabezana neemfuno zokungabinothuli kunye nokungena manzi, kwaye inokumisela ibhokisi yezinto ngokweemfuno zabathengi. Ukulungele ukupakishwa kwezinto ezininzi, inokulinganisa ngokuzenzekelayo, idlulise kwaye itywinwe iingxowa.